DAAWO+XOG: Puntland oo beenisay xog ay heshay PTIMES.
GAROOWE(P-TIMES) – Puntland ayaa beenisay warbixin iyo macluumaad laga helay duulimaad diyaaradeed oo hub siday kana dagay magaalada Qardho, waxayna sheegeen inaysan wararkaas aheyn kuwa sax ah ilaa hadda oo aysan waxba ka jirin.
Taliyaha Garoonka diyaaradaha Qardho Sharmaake Ismaaciil ayaa been abuur ku tilmaamay warar sheegaya diyaarad hub sida laga dejiyay Garoonka,isla markaana waxaa uu sheegay in wararkaas ay faafiyeen dad aan rabin horumarka Qardho.
Sidoo kale Taliye Sharmaake ayaa waxaa uu sheegay in diyaaradaha ka soo dega Garoonka Qardho ay yihiin kuwo la ogyahay,waxaana uu dadka uga dhigay inay faafiyan wararka been abuurka ah.
Xog dheeraad ah oo ka madax banaan saraakiisha Ammaanka oo ay heshay Puntlandtimes.com waxay sheegayaan in hubkan lagu soo qaaday mid kamid ah diyaaradaha qaadka geeya magaalada Qardho, kaas oo markii la ogaaday ay buuq ka dhex abuurtay masuuliyiinta dawladda Puntland.
Guddiga la socodka xayiraadda Hubka saaran Soomaaliya ee Qaramada Midowbay ayaa horey walaac uga muujiyey talaabooyinka ay Imaaraatka Carabtu hubka kugalinayaan Soomaaliya qeybo kamid ah, gaar ahaana warbixintii u dambeeyey ayaa lagu soo qaaday Puntland oo qeyb ka ah Soomaaliya.